Lehibe Places In Eoropa hitsidika Tamin'ny volana Martsa | Save A Train
Home > Travel Europe > Lehibe Places In Eoropa hitsidika Tamin'ny volana Martsa
Fotoana famakiana: 5 minitra(Last Nohavaozina: 30/10/2020)
IT tsy diso aoriana loatra ny drafitra ho nisy sisa afaka tamin'ny volana Martsa, mialoha ny Paska zozoro. Miaraka amin'ny ankizy Rehefa teny an fialan-tsasatra, izao no fotoana hitadiavana ilay fotoana hitsidihana ireo nosy kely mafana sy misy havan-tiana, Nankao anaty sambo lehibe eo amin'ny voalohany fitsangatsanganana an-trano fianakaviana ny taona, Miroboka ao anatin 'izao tontolo izao ny sasany indrindra tanàna mahagaga na manatrika ny iray amin'ireo fety Eoropeana maro tamin'ny Martsa. Betsaka ny toerana tsara any Eropa hitsidika azy amin'ny volana martsa.
Araka ny voalaza, Diabe ihany koa ny fiandohan'ny vanim-potoana fety any Eoropa, ka misy taonina ny fotoana ahafahana manao hifaliako amin'ny an-toerana, ho azy eo ny Citrus-ara-tsindrimandry Fetibe any amin'ny faritra atsimon'i Frantsa, na amin'ny The London Coffee Festival.
Vonona ny mahita toerana lehibe tany Eoropa mba hitsidika tamin'ny volana Martsa? Vakio amin'ny!
Toerana lehibe tany Eoropa mba Hitsidika tamin'ny volana Martsa: London
Rehefa hoy izy ireo, 'Ny andro ny ratsy ao London mbola tsara kokoa noho ny andro mahafaly na aiza na aiza-kafa' izany mazava ho azy, London Tokony ho ao amin'ny lisitry ny toerana mahafinaritra any Eropa hitsidika ny volana martsa.
Diabe dia lehibe volana hitsidika ny Kensington Palace Gardens, Gardens Kew, na ny Ny an'ny London hafa zaridaina ambony, toy ny ranomasina ny crocuses sy daffodils mamelana manerana ny renivohitra.
Raha toa ianao ka mieritreritra ny mitsidika maro ambony attractions, Avy eo dia mampiseho mahazo ny tenanao ho fizahan-tany karatra fihenam-bidy na ny fitetezam-paritra fiara fitateram-bahoaka combo tapakila. Ireo tapakila sy ny amboarany afaka hamonjy anao vola lehibe ny sasany!
Ny London Coffee Festival
Lehibe izahay mpankafy ny kafe. Izahay na dia efa nosoratana momba mahagaga fivarotana kafe Eto alohan'ny. Noho izany, eto koa ny manoratra momba toy ny ampahany amin'ny toerana lehibe tany Eoropa mba hitsidika tamin'ny volana Martsa – ny London kafe festival tamin'ny volana Martsa!
The 2019 UK Coffee Week Mihazakazaka avy 30-31 March 2019. Ireo barista tampon'ny firenena sy mpangataka kafe dia miara-mivory ao amin'ny Brick Lane hankalaza ny kafe. Tsy ho mora kokoa noho ny 250 mpanao asa tanana kafe sy Gourmet sakafo tsoavaly, tastings sy ny fihetsiketsehana, ifandrimbonana atrikasa, sakafo eny an-dalana, kafe mifototra amin'ny Molotov, velona mozika, DJs, kanto fampirantiana sy ny sisa maro hafa.
Te-hahafantatra bebe kokoa ary hahazo tapakila? Lohany manapaka eto: https://www.londoncoffeefestival.com
Lyon to London Eurostar Train
Hafa fanao isan-taona Martsa zava-nitranga in London
Miaraha amin'ny fanao isan-taona ny Andron'ny St Davida ny fankalazana ao Londres miaraka amin'ny antoko Galoà, sakafo fety, ary ny baolina lavalava. 1 Mar
Tuck ho matsiro niisa ny pancakes na crepes amin'ny Pancake Day (Shrove Talata) in London, na misambotra ny Pancake-flipping hetsika amin'ny Pancake hazakazaka. 5 Mar
Hitondra ny Neny ny iray andro avy any Londres amin'ny Fetin'ny reny. Ianao mahita be dia be mahafinaritra zavatra ifandraisany amin'ny Neny, anisan'izany ny tolakandro teas, river Cruises, fiantsenana, ary kira. 31 Mar
Sample labiera vaovao, manatrika labiera Tours ary mifampikasokasoka amin'ny hafa cider, labiera, fa, ary ireo mpankafy lager amin'ny Herinandron'ny labiera any London. TBC
Liege ny London Fiaran-dalamby
London March fanatanjahan-tena
Ataovy izay hahazoana tsara toerana fijerena manamorona ny Tamise Championship Course volana ity ny mahita nivoy Crews avy manerana izao tontolo izao handray ny Lohan'ny River Foko ary ny vehivavy Eights Lohan'ny River Foko. 16 ary 30 Mar
Hanatevin-daharana ny mpihazakazaka, na mijery avy nanara-morona toy ny London Marathon rivotra Monuments Antsasaky ny lalana amin'ny alalan'ny Westminster sy ny City of London. 24 Mar
Fa toerana lehibe kokoa any Eoropa mba hitsidika tamin'ny Martsa in London, hojerentsika ny hetsika kalandrie ary tari-dalana ho inona no amin'ny tany Londres. Ary misambotra ny tsara indrindra tamin'ny Londres sehatra miaraka amin'ny teatra Guide.
Toerana lehibe tany Eoropa mba Hitsidika tamin'ny volana Martsa: Zermatt tany Soisa
Raha toa ka tsy noho ny ririnina mangatsiaka mbola, avy eo Zermatt in Soisa tsara dia tsara tarehy Bet mba hahita ny oram-panala. Ny iray amin'ireo malaza indrindra Resorts in Eoropa, ny vovony dia matetika tsara na dia mandra-pahatapitry ny Aprily.
Toy ny ankamaroan'ny Zermatt Ski faritra lainga ambony 2000 metatra, tsy misy tsy fahampiana ny oram-panala rehefa mitsimoka tia manao ski ambony. Mety ho ny oram-panala amin'ny tanàna patchy. Na izany aza, ny tendrombohitra, hahita zavatra hafa. Fresh oram-panala, voakitika titres, ary be dia be ny voly dia miandry ny ho hita. Mba hiaina ny feno ny vaovao mety oram-panala, raha mbola mijanona azo antoka, Ski manakarama mpitari-dalana ho an'ny sasany eny-piste tia manao ski ambony.
Zermatt no tsy hahaliana ny olona tamin'ny hazoto homana noho ny traikefa nahafinaritra, fa izany ihany koa manana asa mahatalanjona ho an'ireo tsy dia sahisahy fanahy koa. Winter nirenireny tany Zermatt dia heverina ho any amin'ny Toerana mahafinaritra indrindra any amin'ny faritra. Sarintany rehetra ririnina fiakaran'ny Azo jerena ao amin'ny fizahan-tany ny Zermatt tranonkala. Tsy misy ilaina ny mpitari-dalana, araka ny lalana tsara voamarika, nampiofanina, ary azo antoka.
Toerana lehibe tany Eoropa mba Hitsidika tamin'ny volana Martsa: avaratra, Holland
Raha toa ka efa nitsidika ny tanimboly tany Londres mba hizaha ny voninkazo, Nahoana raha hanohy ny fironana? Misambotra ny fiaran-dalamby ho Holland! Ny isan-taona Holland tulip mamelana dia tranga izay mahasarika mpandeha an'arivony isan-taona. Ary marina izany! Diabe dia lehibe toy ny fotoana hamangiana ianao dia ho azo antoka ny hanadino ny vahoaka. Izany no midika fa ny tulips tena mety tsy ho niseho mbola. Mbola Afaka mankafy ny fampisehoana mahagaga ataony ny oram-panala fotsy hoditra, daffodils, ary mavokely tsara tarehy sy Violet hyacinth. Ity farany dia mipoitra eo anelanelan'ny martsa sy aprily. Mazava ho azy, toetr'andro mitovy isan-taona, noho izany dia tsara indrindra mba hanontany ny firenena vita fanoloran-tena tulip tranonkala ho an'ny isan-kerinandro voninkazo vaovao, izay manomboka ny volana Martsa.
Boky ny fiaran-dalamby manaraka dia mampiasa Save fiaran-dalamby
Toerana lehibe tany Eoropa mba hitsidika tamin'ny volana Martsa lahatsoratra bilaogy, resy lahatra anao? Nahoana raha 3 minitra ary hahita ny tapakila tamin'ny fiaran-dalamby saveatrain.com. Fenoy ny daty sy ny fotoana tianao ny handeha ary dia hanome anao ny tsara indrindra amin'ny vidiny ho amin'ny alehanareo, ary afaka mandoa noho ny lamasinina handeha amin'ny fomba maro.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary omeo anay fotsiny ny voninahitra amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fgreat-places-europe-march%2F - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / izany / en na / fanononana kokoa fiteny.
#ny diabe #marchtraveleurope europetravel lohataona trainjourney fiaran-dalamby nankany travelholland travelnetherlands uktravel